Protest – democracy for burma
#หลวงปู่พุทธะอิสระ #จดหมาย #จากใจประชาชนคนไทย
On November 27, 2015 November 27, 2015 By Burma Myanmar newsIn ThailandLeaveacomment
จดหมายจากใจประชาชนคนไทย ถึงนายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย
ประเทศไทยมีสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกามาอย่างยาวนานตลอดเวลา ๗๐ กว่าปี
พวกเราคนไทยทุกคนพยายามทำความเข้าใจในวัฒนธรรม ความเชื่อ การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐมาโดยตลอด พร้อมกับให้เกียรติ โดยไม่คิดจะก้าวล่วงแทรกแซงต่อกิจการภายในของมิตรประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา เพราะพวกเราคนไทยถูกบรรพบุรุษสั่งสอนอบรมให้มีความหวังดีจริงใจแก่ผู้เป็นมิตร แม้ในปัจจุบันนี้ ความหวังดีจริงใจที่คนไทยมีให้ต่อมิตรประเทศในโลกนี้อยู่เสมอ
แต่สหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐแต่ละท่านที่เข้ามาทำหน้าที่เจริญสัมพันธ์ไมตรีกับแผ่นดินไทย ดูจะไม่พยายามเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศมหามิตรอย่างไทยเราเลย
นอกจากจะไม่พยายามเรียนรู้อย่างเข้าใจต่อประเทศไทยแล้ว สหรัฐอเมริกาโดยเอกอัครราชทูต ยังพยายามเข้ามาแทรกแซงเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ความศรัทธา การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ ของแผ่นดินไทย ให้เป็นดังใจที่สหรัฐต้องการให้เป็น ทั้งที่คุณกลิน ที. เดวีส์ พึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งในประเทศไทยได้เพียง ๙ สัปดาห์เท่านั้น
จะเห็นได้จากพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่สถานทูต ตลอดจนเอกอัครราชทูตแต่ละคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในแผ่นดินไทย พยายามเข้ามามีบทบาท แทรกแซง ชี้นำ วิพากษ์วิจารณ์ ต่อกิจการภายในของประเทศไทยในทุกเรื่อง ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการออกกฎหมายที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
หนำซ้ำยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ไร้มารยาท ผิดปกติวิสัยมิตรที่ดีจะพึงมีต่อกัน ขาดการให้เกียรติ ไม่ยอมรับในความต่าง ดูถูกศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และเหยียบย่ำอารยะธรรมของบรรพบุรุษไทย
พฤติกรรมของสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำสถานทูตสหรัฐที่แสดงออก พวกเราคนไทยมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมของมหามิตรที่ดีที่กระทำต่อกัน แต่กลับทำประหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นทาส เป็นเมืองขึ้นของสหรัฐ จะจิกหัวตำหนิติด่าตามความพอใจ โดยไม่เกรงใจ ไม่ให้เกียรติ ไม่ยอมรับในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีของชนชาติไทย
ประเทศสหรัฐโดยเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ทูตประจำประเทศไทยพยายามจะใช้มาตรฐานของตนเองมาเปรียบเทียบกับประเทศไทย และมีเจตนาที่จะกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่สหรัฐมุ่งหวัง ทั้งที่ไม่มีสิทธิ ไม่มีอำนาจ ไม่สมควร
ท่านทูตสหรัฐต้องไม่ลืมว่าแผ่นดินไทย คนไทย มิได้เป็นทาสหรือเมืองขึ้นของสหรัฐ ประเทศสหรัฐไม่มีอำนาจมาบงการ แทรกแซง ชี้นำ หรือล้มล้างกฎหมายของแผ่นดินไทย โดยเฉพาะกฎหมายที่ว่าด้วยการคุ้มครองสถาบันหลักของชาติ ซึ่งพวกเราถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมแรงรวมใจและความมั่นคงของชาติ
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ ที่คนไทยทุกคนพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อปกป้อง หากประเทศสหรัฐโดยสถานทูตมีความจริงใจที่จะดำรงรักษาเอาไว้ซึ่งความสงบสุขของชาติไทยและรักษาบรรยากาศของมิตรประเทศที่ดี ก็ควรจะเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจว่า ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์คือจิตวิญญาณของคนไทย จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้
การที่นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลไทยอย่างรุนแรงทั้งที่เหยียบยืนอยู่ในแผ่นดินไทย ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติมิตรประเทศ ผิดมารยาทของทูตที่ดีอันควรกระทำ อีกทั้งยังมาวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายที่ปกป้องพระมหากษัตริย์ ผู้ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศ ยิ่งเป็นการมิบังควร เป็นการเหยียดหยามทำลายจิตใจและศักดิ์ศรีของประเทศไทย
พวกเราจึงต้องพากันมาร้องตะโกนบอกกับท่านทูตว่า อย่าเสียมารยาท ประเทศไทยมิใช่ทาสหรือเป็นเมืองขึ้นของสหรัฐที่คิดจะทำอะไรก็ได้ อย่ามาทำลายความเป็นมิตรประเทศด้วยการเข้าจุ้นจ้านแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยอีกเลย อย่าพยายามใช้มาตรฐานของตนมาครอบงำข่มขู่บังคับให้ประเทศไทย คนไทย ต้องเปลี่ยนไปตามประเทศสหรัฐ ถ้าคุณทำก็เท่ากับคุณกำลังทำลายจิตวิญญาณของคนไทย เราไม่ยินยอมแน่นอน
หากคิดจะเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันก็ควรจะยอมรับความต่างและให้เกียรติซึ่งกันและกัน และช่วยกันสร้างบรรยากาศของความร่วมมือ เพื่อให้มิตรประเทศอยู่ร่วมกันได้อย่างจริงใจ สันติ เจริญรุ่งเรือง
“ทูตมะกัน” เรียกแขก! “หลวงปู่พุทธะอิสระ” ขนคนลุยสถานทูตสหรัฐ -ย้ำ แส่ไม่เข้าเรื่องวิจารณ์ ม.112
!! #ကိုနေမျိုးဇင် #ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေကို #နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထောင်ချအရေးယူနေကြပြီ တဦးစီကို လေးနှစ်လေးလချလိုက်ပါပြီ
On May 15, 2015 May 16, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, CHINESE EMBASSY PROTEST, MYANMAR, NAY MYO ZINLeaveacomment
ဒဂုံမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ကိုနေမျိုးဇင် ရဲတွေကိုပြောခဲ့တဲ့စကား ၁၅.၅.၂၀၁၅ Dagon Township Court Nay Myo Zin
နိင်ငံတော်တာဝန်ရှိလူကြီမင်းများအပြောကတမျိုးလုပ်တော့ အောက်တန်းစားအလုပ်နဲ့တိုင်ပြည်ကြီးကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့လိုကိုနေမျိုးဇင်ကပြောcr.အာဏာရှင် ကျဆုံးပါစေ-
အများအကျိးသယ်ပိုးဆောင်ရွက်ပြီးကိုယ်ကျိုးမဖက် ဘဲ ပြည်သူဘက်ကနေစွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ ငါတို့ဆရာသမားကိုမတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထောင် ချခဲ့တဲ့မတရားသူကြီးတွေ တရုတ်ကျွန်ခံ တဲ့ကောင် တွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထု မှမထောက်ဘဲ မတရားပုဒ်မတပ်ပြီးဖမ်းဆီးချုပ်နှောင် တာဟာ တရားပါသလား ပြည်သူအကျိုးပြုပြီးပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်တဲ့သူကို ကြတော့ထောင်ထဲထည့်ပြီး လက်ပန်းတောင်းတောင် အရေးအခင်းကိစ္စဖြစ်ခဲ့တုံးက တရုတ်ကျွန် ရဲ ကသေ နတ်နဲ့ပစ်သတ်လို့သေခဲ့တဲ့ ဒေါ်ခင်ဝင်းအမှုကြတော့ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဘာလုပ်နေလဲ ဒါမျိုးကြတော့ တရားသူကြီးတွေဘာလုပ်နေလဲ ဒီအကြောင်းတွေကို ကြည့်ရင် တရားရေးစီရင်ချက်တွေဟာလုံးဝယုံကြည် စရာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ် သူတော်ကောင်းတွေအချုပ်ထောင်ရောက်နေပြီး သူယုတ်မာတွေကြတော့လွှတ်ထားတာ တရားပါ သလား စဉ်းစားကြပါအုံး မတရားသူကြီးတွေနဲ့ တရုတ်ကျွန်ခံတရုတ်လက်ပါးစေတွေရယ် ဆရာသမားကိုနေမျိုးဇင် ပြည်သူ့တွေရဲ့မေတ္တာရေ တွေနဲ့ပြည်သူ့ကိုယ်စားဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် အမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်နိုင်ပါစေလို့ CR.Koyote Soe
#မြင်းခြံမှာ #အကြမ်းဖက်တယ် #မအေလိုးတွေ -##ဥပဒေအရ #အရပ်ဝတ်နဲ့တားပြီး
On March 27, 2015 March 27, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, LATPADAN, MYANMAR, PROTESTLeaveacomment
မြင်းခြံမှာ အကြမ်းဖက်တယ် မအေလိုးတွေ CR.D Ye Thawe
ဥပဒေအရ အရပ်ဝတ်နဲ့တားပြီး ဥပဒေအရ ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဝတ်မထားသော ရဲ ကဆွဲချလိုက် တယ်။ ဒီနေ့ရွှေမန္တလေးရဲ့ သိပ္ပံလမ်းပေါ် လျှက်တပြတ် အကြမ်းဖက်။ CR.Khin Maung Htun
—————————————————— ဒါတွေအားလုံးငါတို့မြင်းခြံမှာဖြစ်ခဲ့တာ၁၀နာရီ၁၀မိန်စ် Sayar Kyaung
On March 13, 2015 March 13, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MOETHEE ZUN, MYANMAR, student protestLeaveacomment
စဉ်းစားလို့ မရတာက… အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးလို့ ကြွေးကြော် သပိတ်မှောက်တယ်… ဒါပေမယ့် အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်ဖို့ထက်… ရန်ကုန်ကိုချီတက် ဆန္ဒပြဖို့က ဘာကြောင့် ပို အရေးကြီးနေရတာလဲ? Continue reading “#ဂွေးသီးနဲ့#ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ဖူးသူများ #သတိ #အစိုးရ #ကို #လှန်မကြည့်နဲ့။” →
#MPC #PRESS #မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)၏ #ထုတ်ပြန်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
On March 10, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, MYANMAR, PRESSLeaveacomment
နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က မလေးမစားပြုသည့်သဘောရောက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) ထုတ်ပြန်
ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်းတွင် သတင်းရယူနေသည့် သတင်းထောက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ယခုလုပ်ဆောင်မှုသည် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် မလေးမစားပြုသည့်သဘောရောက်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)၏ ထုတ်ပြန်ချက်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ လက်ပံတန်းမြို့တွင် ရောက်ရှိနေသော သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားများနှင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စောင့်ကြည့်၍ ပြည်သူလူထုထံ သတင်းတင်ပြပေးနေသော သတင်းမီဒီယာသမားများကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်နေခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က များစွာ စိုးရိမ်မကင်း ဖြစ်မိပါသည်။
၂။ကျောင်းသားများ၏ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြမှုကို ထောက်ခံခြင်း၊ ကန့်ကွက်ခြင်းမပါဘဲ ဖြစ်စဉ်များအတိုင်း သတင်းတင်ပြနေသည့်အပြင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆန္ဒပြခြင်းလည်း မရှိသည့် သတင်းထောက်များကို နိုင်ငံတကာတွင် အဓိကရုဏ်းများ၊ ဆန္ဒပြမှုများအတွက် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းများ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားသော သတင်းမီဒီယာဥပဒေပါ သတင်းထောက်များ၏ ရပိုင်ခွင့်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားတို့၏ အခြေခံရပိုင်ခွင့်များနှင့် ဆန့်ကျင်ကာ ယခုကဲ့သို့ နှိမ်နှင်းဖမ်းဆီးခြင်းသည် နိုင်ငံတကာနှင့် ပြည်တွင်းရှိ ဥပဒေများကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က မလေးမစားပြုသည့် သဘောရောက်သည်ဟု ကောင်စီက ရှုမြင်ပါသည်။
၃။လက်ပံတန်းမြို့တွင် ယခုတစ်ကြိမ် သတင်းထောက်များ ဖမ်းဆီးခံရမှုသည် ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်သည့်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ရပ်ကို မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ)က ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်းနှင့် ဖမ်းဆီးထားသည့် သတင်းထောက်များကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကောင်စီက အလေးအနက် တောင်းဆိုအပ်ပါသည်။
#YE HTUT #ပုဒ်မ ၅၀ > #ဖမ်းဆီးရမိသူ #ထွက်မပြေးနိုင်စေရန် #လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ တားဆီးကန့်ကွက်မထားရ
On March 7, 2015 By Burma Myanmar newsIn UncategorizedLeaveacomment
ဦးရဲထွဋ်တို့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေကို ထုတ်ပြတော့ ကျန်ခဲ့တယ်ထင်လို့ မြန်မာပြည်သားပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
ပုဒ်မ ၅၀ >> ဖမ်းဆီးရမိသူ ထွက်မပြေးနိုင်စေရန် လိုအပ်သည်ထက်ပို၍ တားဆီးကန့်ကွက်မထားရ
ပုဒ်မ ၅၂ >> အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်ပေါ်တွင်ရှာဖွေရန် လိုအပ်လျင် အခြားအမျိုးသမီး တစ်ဦးအား တာဝန်ပေးပြီး ရှာခိုင်းရမည် ထိုသို့ရှာဖွေရာတွင် အမျိုးသမီး၏ ကာယိနြေ္ဒကို ကြပ်တည်းစွာ စောင့်စည်းရမည် CR.
!!! #DKBA #ကလိုထူးဘော #စစ်ဌာနချုပ် #ရက်စွဲ – ၄.၃.၂၀၁၅
On March 4, 2015 March 4, 2015 By Burma Myanmar newsIn Burma, DKBA, MYANMAR, STUDENTSLeaveacomment